PC-MOS yakaberekwazve seyakavhurika sosi purojekiti | Linux Vakapindwa muropa
Chokwadi haurangarire chirongwa ichi, asi kune yekushandisa system Microsoft MS-DOS Izvo zvakatonga musika weIBM PC makomputa muma80, vamwe vakwikwidzi vakabuda, senge MS-DOS 5 dombo inonzi PC-MOS / 386 yakagadzirwa muna 1987 uye yaive yakawanda-mushandisi. Iyo inoshanda sisitimu inogona kumhanyisa yemuno maMS-DOS kunyorera uchishandisa Intel's 386 microprocessor yakadzivirirwa modhi uye inoenderana machipisi. Kubudirira panguva iyoyo ...
PC-MOS / 386 Yakabuda sekushanduka kwePC-MOS uye yakagadziridzwa, sezita rayo rinoratidzira, kune 80386 microprocessors, yakanyorwa mumutauro wegungano uye zvakare muC, inokwanisa kumhanyisa Microsoft's operating system software uye kubhurwa kubva ku3.5 floppy disk. iyo system mufananidzo yakatakurwa, kunyangwe parizvino inouya neCD-ROM madhiraivha uye nezvimwe zvinhu zvitsva.
Zvakanaka ikozvino zvinozivikanwa izvo Roeland Jansen, mumwe wevagadziri vayo, anoenderera mberi neakavhurwa sosi chirongwa. Iwe unogona kuona rumwe ruzivo nezve ino inoshanda system uye nezve budiriro kubva webhusaiti yepamutemo yeprojekti. Unogona kuiyedza mumamishini chaiwo nekuda kweiyo virtualization software VMWare Workstation kana Oracle VirtualBox, kunyangwe kana iwe uine muchina kubva kuma80s uye ma diskettes erudzi urwu, unogona kuimhanyisa pamushini wepanyama.
Kuburitswa kutsva ndiko pasi peGPL rezinesi mushanduro yayo 3, saka iri yemahara uye yakavhurwa sosi purojekiti. Kana iwe uchida kuinyora, iwe uchazoda compiler kubva kutanga kwema90's, inozivikanwa Borland C ++ 3.1, kunyangwe mamwe ma compiler aigona zvakare kushanda, iyi ndiyo yakakodzera kwazvo. Chaizvoizvo hobho kuti iyo inoshanda sisitimu inoshanda uye kumutsa yako yekare MS-DOS rig ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » PC-MOS yakaberekwazve seyakavhurwa sosi projekiti
Zvakanaka, isu tatova nemaDOS maviri emahara. : D